အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ပါ (Although we stay apart.......) (離れていても・・・) ~ ဒီမိုဝေယံ
အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ပါ (Although we stay apart.......) (離れていても・・・)
(Although we stay apart.......)
အရှင်ဆန္ဒာဓိက ဆရာတော်နဲ့ တလောက ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားတဲ့ အမေစုတို့ Bagan River View ဟိုတယ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူ.. ဆရာတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုဖြစ်တဲ့ အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ပါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးအား ပိုစ့်မှာ ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်...။ ခွဲခွါနေရသူ အားလုံးအတွက် ဆရာတော်ရဲ့ အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ပါ (စကားစုအား) ဝိမုတ္တိသုခရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ဂျပန်ဘာသာပြန်အား ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။
လောကမှာ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူ၊ ကိုယ်ကြည်ညို လေးစားတဲ့သူနဲ့ အနေနီးချင်ကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ကံတရားစတဲ့ အကြောင်းတရား အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူ၊ ကိုယ်ကြည်ညို လေးစားတဲ့သူတွေနဲ့ အနေဝေးရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ခတ္တခဏ အနေ ဝေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်။
တစ်သက်တာလုံး ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ ဝေးခြင်းမျိုးနဲ့ ထာဝရအနေ ဝေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
လူချင်းအနေဝေးပေမယ့် စိတ်ချင်းအနေမဝေးရင် အဝေးနေတယ်လို့ မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Quoted from: အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ပါ
Although we stay apart.......
Although people are in touch, they may not be intimate.
Everyone in this world wishes to be close to someone they loved, adored and admired.
No one wants apart from them.
However, because of various reasons, there are many situations where we have to stay apart from those people we loved.
Some are separated temporarily.
Some are away from each other foravery long time.
Some cannot meet each other till the end of our lives.
Anyhow, as far as those minds of us are intimate, although we stay apart, no one can say that we are dispersed.
Ashin Sandadika (Shwe Parami Tawya Vihara)
触れるほど　近くにいても　心を　通わせていない　事もある。
世界中の誰もが　愛する人、尊敬する人、　すばらしいと思う人の　そばに　いたいと　思っている。
いったい　誰が　そんな人たちと　離れたいと　願うだろうか？
でも、　さまざまな　理由や　状況のため　愛する人と　離れ離れに　なってしまった　人も　いる。
ある人は　短い間　ある人は　長い間、 また　生涯　そのねがいが　適わない人も　いる。
でも、　心は　通い合って　いる、 実際には　離れていても、私たちを　離れ離れだと　誰も　言えはしない。
アシンサンダーデカ　（ シュエーパラミー ビハラ）
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ ဒီ quotation လေးကို FB မှာတင်ထားတာ တော်တော်များများ သဘောကျကြတာ သတိထားမိပါတယ်။ စမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပြီး ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ဂျပန်ဆရာမကို ပြကြည့်တော့ သူကလည်း သဘောတွေကျပြီး ကျွန်တော့်ကို ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူဘာသာပြန်ထားတာကို တခြား ဂျပန်တွေကိုပြကြည့်တော့ သူတို့တွေလည်း နှစ်သက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်လို့ တခြားနိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေချင်သူများအတွက် အသုံးတည့်မလားလို့ ဆရာတော့် Quotation ကို အင်္ဂလိပ် ဂျပန် တွဲပြီး ထပ်တင် ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။